किन यो त्यसैले आकर्षक यात्रा युरोप मा तालिम छ? | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > किन यो त्यसैले आकर्षक यात्रा युरोप मा तालिम छ?
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 22/01/2021)
रेल लिएर सबैभन्दा underrated प्रकारका छ आधुनिक यातायात. InterContinental रूपमा हवाइजहाज सवारी हरेक वर्ष थप किफायती बन्न, तर गाडिहरु सबैतिर वृद्धि छन्. किन रेल द्वारा यात्रा गर्न सबैभन्दा आकर्षक तरिका हो धेरै कारण छन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पार.
को Bernina एक्सप्रेस
उदाहरण को रुपमा, को द्वारा प्रस्तावित ठाँउहरु Bernina एक्सप्रेस एक्लै एक रेल कट्टर मा कुनै पनि विमान उत्साही रूपान्तरण गर्न पर्याप्त छन्. Chur र सेन्ट देखि stretching. उत्तरी इटाली गरेको Tirano गर्न भव्य पूर्वी स्विट्जरल्याण्ड मा Moritz, को Bernina एक्सप्रेस पनि सबैभन्दा सुंदर रूपमा जानिन्छ रेल यात्रा संसारमा. यो यात्रा को कुल फैलिएको 90 माइल. त्यसको मतलब4चलचित्र घन्टा अल्पाइन परिदृश्य, ग्लेसियर, ठूलो झरने, र नाटकीय ravines.
को को सबै रमणीय दृश्य हरेक यात्री कार मा एक्सप्रेस 'उदार Vista Windows मार्फत देखिने छ. यात्रा Bernina पास मा culminates. मा 7,000 समुद्र स्तर माथि खुट्टा, को पास चर्किरहेको snowstorms गर्न खतरा छ. यसैबीच, घाम इटाली तपाईं पर्खिरहेको यो यात्रा को अन्य अन्त मा. यो सुंदर रेल सवारी प्रत्येक रेलमार्ग प्रेमीको बाल्टिन सूचीमा अनिवार्य हुनुपर्दछ.
यसैबीच, कि सूची मा एक्सप्रेस सामेल छ DB वा Deutsche Bahn. जर्मनी राष्ट्रिय रेल नेटवर्क नदी राइन नजिकै सबैभन्दा सुंदर सवारी केही प्रदान गर्दछ. यसको मार्गहरू आल्प्स को हडताली दृश्यहरु र पहाड घाटिहरुमा मार्फत हुनेछ. उदाहरण को रुपमा, मूल्यांकन गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका युरोप गरेको सबैभन्दा लामो नदी मेन्ज र को शहर जडान कि मार्ग मार्फत छ कोलोन. यो मार्ग कोमल पहाड मार्फत लिन्छ, महल crumbling, र terraced दाखबारी.
DB नियमित रेल सवारी जडान प्रदान गर्दछ एम्स्टर्डम जस्तै शहर, कोपेनहेगन, र प्राग जर्मनीको प्रमुख metropolises गर्न. को Bernina एक्सप्रेसमा समान, यो युरोप गरेको heartland हेर्न एक शानदार तरिका हो. यो कुनै आश्चर्य भन्ने सीएनएन Deutsche Bahn बुझाउँछ रूपमा "सबैभन्दा सुखद को एक जर्मन यात्रा अनुभव कि समावेश छैन एक मर्सिडीज बेन्ज 450. " जबकि युरोप गरेको रेल ज्यादातर लामो क्रस-देश र क्रस-महादेशमा यात्राको लागि बेशकीमती, त्यहाँ थप आकस्मिक रेल यात्री अन्य छोटो विकल्प हो. उदाहरण को रुपमा, को बर्लिन Ringbahn सधैं लोकप्रिय बीच भएको छ पर्यटक जो एक सरल चाहनुहुन्छ पर्यटन शहर को भ्रमण. तपाईं एकल टिकट को मूल्य को लागि यो प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ.
आकर्षक रेल यात्राको कुनै भाषण ट्रांस-साइबेरियन एक्सप्रेस सहित बिना पूर्ण हुनेछ. पनि जानिन्छ सबैभन्दा लामो रेल यात्रा ग्रह मा, को ट्रांस-साइबेरियन एक्सप्रेस पूर्वी रूसी मा भ्लाडिभास्तोक को तटीय शहर पश्चिमी रूस मा मास्को जडान. बाटो साथ, रेलमार्ग शाखा बाहिर नजिकै शाखाहरू चीन जस्ता देशहरू, मङ्गोलिया, र उत्तर कोरिया. धेरै स्थानहरु पश्चिमी युरोप, एम्स्टर्डम सहित, छ रेलवे स्टेशन सेन्ट मा ट्रान्स-साइबेरियन स्टेशन कि प्रस्ताव सवारी. पीटर्सबर्ग, रूस. कुनै आश्चर्य धेरै यूरोप पूर्व venturing जब रेल लिन चयन.
रेल द्वारा रूस वरिपरि यात्रा को छ यात्रा गर्न सस्ता तरिका. प्रदान, यो पनि ढिलो एक हो, Ladbrokes दावी एक संग एकै रातमा ताजा स्थिति रेल बेलग्रेड देखि Nizhny गर्न नोभगोरोड लिन्छ 27 घण्टा. अझै पनि, देश विश्व कप होस्ट गर्दा रूस व्यापक रेलवे सिस्टम कार्य धेरै यस वर्ष देखे. धेरै प्रशंसक तिनीहरूले रेल द्वारा जुडनार गर्न यात्रा रूपमा देश बढी र आफ्नो मान्छे देख्न पायो.
यो अर्को आकर्षक र अक्सर-अनदेखी पक्ष हो रेलवे यात्रा. पक्कै पनि, त्यहाँ मानिसहरू जस्तै केही छ र अनुभव तपाईं सँगसँगै सामना छौँ. सबै दुनिया भर देखि सबै भन्दा आकर्षक मान्छे केही पूरा गर्न तयार. Whichever क्रस-देश रेल यात्रा तपाईं हुनुहुन्छ, तपाईं मित्र वा दुई सँगी रातारात यात्री बीच फेला अन्त गर्न चाहाने. तपाईं सुंदर Bernina एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ कि, को Deutsche Bahn वा ट्रांस-साइबेरियन एक्सप्रेस या त मा धेरै देशहरूमा traversing, वा स्विट्जरल्याण्ड गरेको ग्लेशियर एक्सप्रेस मा आराम, जो संस्कृति यात्रा को Bernina को ठाँउहरु प्रतिद्वन्द्वी एक यात्रा रूपमा वर्णन, रेल द्वारा journeying आफ्नो जीवन को सबै भन्दा आकर्षक अनुभव हुन बाध्य छ.
तपाईंको जीवनमा उत्तम ट्रेन अनुभव प्राप्त गर्न, सस्तो मूल्यमा, र obnoxious बुकिंग शुल्क को राहत, प्रयोग एक ट्रेन सेव!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-train-travel-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#transsiberian trainjourney रेल यात्रा traveltips